एकाएक आयो यस्तो खबर ! गोर्खा भर्ती रोक्दै नेपाल सरकार भारतभर रुवा*बासी! फौ*ज हटाउदै कालापानी बाट (सेयर गरिदिनु) – Onlines Time
एकाएक आयो यस्तो खबर ! गोर्खा भर्ती रोक्दै नेपाल सरकार भारतभर रुवा*बासी! फौ*ज हटाउदै कालापानी बाट (सेयर गरिदिनु)
April 1, 2021 onlinestimeLeaveaComment on एकाएक आयो यस्तो खबर ! गोर्खा भर्ती रोक्दै नेपाल सरकार भारतभर रुवा*बासी! फौ*ज हटाउदै कालापानी बाट (सेयर गरिदिनु)
चियावालीका नाममा अहिले सामा’जिक सञ्जालमा चर्चित रहकी श्रृष्टि तामा’गंको घरभेटी निकै सहयोगी रहेछन् । श्रीमानले अलपत्र पारेपछि दुई वर्षकी छोरी काखमा बोकेर उनी रातभरी का’ममा खटिन्थिन् । दुई वर्षकी छोरी पिठ्युमा बोकेर राती ३ वजे उठेर काममा लागेको भिडियो सार्व’जनिक भएपछि उनी चर्चित भएकी हुन् । उका श्रीमानको बारेमा भने अर्को ठूलो रहस्य खुलेको छ । उनले इराक पठाइदिन्छु भन्दै गाउँका धेरैलाई समस्यामा पारेका कार’ण अहिले सम्पर्क विहिन भएको थाहा भएको हो ।
श्रीमानले अल’पत्र पारेर हिडेपछि भाडामा बस्दै आएकी श्रृष्टिले घरभाडा वापत एक लाख १६ हजार रुपैया तिर्न पर्ने थियो । श्रीमान हिडेपछि घरभेटीले श्रृष्टिलाई आफ्नो परिवारको स’दस्य जस्तै राखेका थिए । पहिला दुई कोठा दिने गरेकोमा श्रीमान गएपछि उनीहरुले एउटा कोठा श्रृष्टिका लागि छोडि’दिएका थिए । परिवार जस्तो गरेर राखेका थियौं, श्रृष्टिको घरभेटीले भने, उनको दुख देखेर हामीले भाडा माग्न पनि सकेनौं । उनको इमान्दारीता देखेर घर’वाट निकाल्न पनि सकेनौं ।
उनीहरुले श्रीमान श्रीमतीबीच के सम’स्या हो भन्ने थाहा नपाएको घरभेटीको भनाई छ । गएको पुष महिना देखि नै उनीहरुको सम्बन्धमा सम’स्या देखेको उनीहरुको भनाई छ । तर पछि श्रीमान कोठामै आउन छोडे पछि श्रृष्टि वहिनीको घरमा केही दिन गएर बसेको र पछि आफ्नै घरमा फर्केर आएको घरभेटी महि’लाको भनाई छ । उनले विस्तारै सकेको तिर्छु भनेपछि श्रृष्टिलाई घरवाट निकाल्न नसकेको उनको भनाई छ ।
तर अहिले श्रृष्टि’लाई लिनुपर्ने भाडा सबै मिनाहा गरिदिएको उनीहरुको भनाई छ । श्रृष्टिको घरभेटी हो भन्दा पनि हामीलाई अहिलो गौरव लागेको छ घर’भेटीले भने, आफ्नै श्रीमानले त नहेरेको अवस्थामा उनको इमान्दारीता देखेर हामीलाई पनि माया पलायो । श्रृष्टिले विहानै उठेर काम गरेको देखेपछि मेहनत गर्दा पनि तिर्न नस’केको हो भन्ने लागेर केही नभएको उनीहरुको भनाई छ ।
श्रृष्टिका श्रीमानले इराक ल’गिदिन्छु भन्दै गाउँका साझालाई ठ ग्ने गरेको खुलेको छ । उनले गाउँका युवा युवतीलाई प्रलोभनमा पारेर विदेश पठा’इदिछु भन्दै पैसा उठाएको प्रमाण फेला परेको हो । श्रृष्टिवारे भिडियो सार्वजनिक भएपछि उनका श्रीमानका बारेमा खोजी सुरु भएपछि बुद्धिले समस्यामा पारेकाहरु पनि मिडि’यामा आएका हुन् । उनीहरुले श्रृष्टिको श्रीमानले पैसा लिएर विदेश पठाइदिन्छु भन्दै ठगेको भन्दै कागज देखाउँदै सार्वज’निक भएका छन् । इताजा खबरबाट
युवती भन्छिन् “म छ्याङ्ग (जाँड) खाएर सुते पहिलो पल्ट खाको .. बिउँझिदा बाजेले” .. (भिडियो सहित)
घ’ना जं’गलभित्र नेपाली सेना*ले यस्तो काम गर्दै; भि¥डियो संसारभरी भा*इरल हुँदै( सम्मान स्वरुप सेयर गराै)
छुटिएर गएकि श्रीम’तीलाई न्याय माग्दा अदा’लतले घरमै बस्नु पर्छ भनेर राखीदिएपछि श्री’मानले बन’चराे चला’ए ॥
January 23, 2021 onlinestime
इन्द्रेणीमै राख्ने भए मु*स्लिम गायक अलिफ खानलाइ कृष्ण कंडेलले,अलिफ खुसीले गदगद (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)
February 3, 2021 February 14, 2021 onlinestime
चेन्नईमा मृगौला फेल भएपछि जीवन मरणको स्थितिमा युवक, सहयोगका लागि लगाए गुहार (सहयोग स्वरुप सेयर गराै)
February 12, 2021 February 14, 2021 onlinestime